Malunga nathi-Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co, Ltd.
I-Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co, Ltd. yasekwa ngonyaka ka-2000. Ngomhla we-19 ku-Agasti ka-2011, inkampani yadweliswa kwiNtengiso yeShishini yokuKhula kweShenzhen Stock Exchange (isitokhwe sekhowudi 300255). Inkampani ineziseko ezine zemveliso, iinkxaso ezilithoba, iinkampani ezimbini zaphesheya kwezilwandle, kunye namashishini amabini adibeneyo. Inkampani yinkampani yamachiza amachiza amachiza amancinci amanyeneyo, edibanisa uphando kunye nophuhliso, ukuvelisa, ukuthengisa, urhwebo lokuthengisa kunye nokungenisa impahla kumazwe angaphandle. Lishishini eliphambili lobugcisa obuphezulu kunye neemveliso ezisuka kwiimveliso ze-heparin ezingacacanga ukuya kwizitofu ze heparin ezinesisindo esisezantsi kunye ne-heparin eqinileyo yemveliso kwicandelo le heparin, kunye nenkampani yamayeza ekhokelayo ekwenzeni imveliso yeheparin yasekhaya.
Ukusukela oko yaqalwa, inkampani ibiphanda, iphuhlisa, ithengisa kwaye ithengisa iziyobisi zezifo ezinentliziyo, izifo zeswekile kunye nesifo seswekile kunye neziyobisi ezichasene nomhlaza. Inkampani iyandisile ngenkuthalo imisebenzi yayo, kubandakanya izixhobo zonyango, iimveliso zobuhle, kunye nonyango oluchanekileyo. Ezi mveliso zithunyelwa kwelinye ilizwe e-United States, iJamani, iFrance, i-Itali, iSpain, South Korea, Japan, Russia, India, Philippines, nakwamanye amazwe ehlabathi.
Kwiminyaka emininzi, i-CSBIOhas igxile kuphando kunye nophuhliso kunye nokubhaliswa kweemveliso ze-heparin kunye nemveliso ye-hyaluronic acid ekhaya kunye nakwamanye amazwe, kwaye ngokuthe ngcembe iya kwandisa uphando kunye nemizamo yophuhliso kwimimandla yesifo seswekile i-abenazin kunye neAntineoplastic yeziyobisi c-yadibana. Siza kwakha ubume besicwangciso kunye ne-heparin uthotho njengeyona nto iphambili kunye nophuhliso lwamachiza oqeqesho oluninzi.